Somaliland: Soo Laba-Kacleynta Cudurka Covid-19, Gaabiska Xukuumadda iyo Khatarta Jirta - SomalilandPost
Home News Somaliland: Soo Laba-Kacleynta Cudurka Covid-19, Gaabiska Xukuumadda iyo Khatarta Jirta
Somaliland: Soo Laba-Kacleynta Cudurka Covid-19, Gaabiska Xukuumadda iyo Khatarta Jirta
Hargeysa (SLpost)- Xanuunka Dunida aadka ugu faafay ee Covid-19 ayaa u muuqda inuu dib ugu soo laba-kacleeyay Somaliland.
Xogtan ayaa sheegaysa in bishii hore marka 100 Qof laga baadho Xanuunka Covid-19 laga helayey 1 Qof ama dhammaantood aan laga helayn, balse bishan October ayaa Xaaladdu isbeddeshay waxaana la sheegay in 100 Qof ee la baadho 10 ka mid ah laga helayo ama in ku dhow, taasi oo muujinaysa khatarta jirtaa inta ay leeg tahay.
Dhinaca kale, marka loo kuur-galo Xogta xannuunkan ku saabsan ee lagu baahiyo Mareegaha Internetka ee Wasaaradda Caafimaadku ugu talo-gashay in laga socdo heerka xannuunku ka marayo dalka, waxa muuqata in maalinba maalinta ka dambaysa ay sii kordhayaan tirada dadka la baadhay ee xannuunka laga helay.
Sida xogtani muujinayso, tirada guud ee dadka xannuunka laga baadhay gudaha Somaliland, ayaa maraysa 11,360 Qof, kuwaas oo 1,009 ka mid ah xannuunka laga helay. Waxa inta la ogyahay cudurka Covid-19 gudaha Somaliland ugu geeriyooday 32 qof, halka 926 qof ka bogsadeen.
Waxa kale oo muuqata inuu jiro gaabis ka muuqda wasaaradda Caafimaadka iyo Guddiga heer Qaran ee loo xilsaaray xakamaynta Xannuunka Covid-19 oo xilligan faro-baas ku haya dalalka adduunka intooda badan oo uu ku soo laba-kacleeyey isla markaana feejignaan dheeraad ah oo faafistiisa lagu xakamaynayo ay ku tallaabsadeen.
In kasta oo ay jirto khatar muuqata oo muujinaysa inuu xannuunkani si baahsan ugu dhex-jiro bulshada Somaliland, haddana ma jiro qorshe ilaa hadda la shaaciyey oo Wasaaradda Caafimaadka iyo Guddiga Heer Qaran ee Covid-19 kaga hortagayaan xakamayntiisa.
Somaliland: Tiradii ugu badnayd COVID-19 oo la helay iyo Dhimashada oo korodhay